Afhayeenka Amisom oo kawaramay ciidamo ka socda Sierra leone oo kusoo biiraya Amisom – Radio Daljir
Abriil 7, 2013 1:36 g 0
Muqdisho April, 7 Afhayeenka ?ciidamada midowga Afrika ee ?AMISOM Col Cali Aadan Xaamud oo waraysi siiyey Radio Daljir ayaa tafaasiil dheeraad ah ka bixiyey ciidamo ka socda wadanka kuyaala galbeedka Qaaradani Afrika ee ?Sierra leone kuwaasoo kusoo biiraya hawlgalka Amisom.
Wuxuu sheegay in ciidamo gaaraya ilaa 200 oo askari xiligani ay diyaar yihiin dhowaana imaan doonaan Soomaaliya iyadoo qayb kamid ah ciidamadaasi ay yimaadeen xiligan gudaha Soomaaliya.?
Dhawaanka waxaa la qoondeeyey ciidamo ka tirsan dawladda Sierra leone in ay ka mid noqdaan hawlgallada ciidanka ee midawga Afrika ka wadaan Soomaaliya, kaasoo haatan socday muddo dhawr sanno ah.
Wajigii hore ee ciidamadaasi oo dhan 200 oo askari ayaa soo degay, iyadoo sidoo kalena lagu wado cutubyo kale in ay ku xigi doonaan, kuwaasi oo qayb ka noqonaya hawlgalka AMISOM.
Afhayeen ciidamada AMISOM Cali Aadan Xaamud ayaa ? sheegay qaabka hawlgal ee ciidankani in uu noqon doono midkii caadiga ahaa ee AMISOM, isagoo isla waraysigiisaasna uga hadlay hawgalka guud ee AMISOM iyo natiijooyinkii uu gaaray.
Ergadda doorashada Madaxweynaha Jubbaland oo laga dhigay 500 oo xubnood